कोरोना भाइरस नेपाल: क्वारन्टीन रित्तिन थालेपछि अब प्रदेशहरू परीक्षणको रणनीति बदल्दै - Media Campaign Against Covid19
कोरोना भाइरस नेपाल: क्वारन्टीन रित्तिन थालेपछि अब प्रदेशहरू परीक्षणको रणनीति बदल्दै
२९ असार २०७७, सोमबार १५:४३
वैशाखको अन्तिम सातादेखिनै नेपालका खासगरी सीमाक्षेत्रमा भारतबाट फर्किने मानिसहरूको ताँती लाग्न थालेको थियो।
विदेशमा गएका नेपाली श्रमिकहरू देश फर्किने क्रम बढ्न थालेसँगै देशका विभिन्न भागमा व्यवस्थापन गरिएका क्वारन्टीन स्थलहरूमा मानिसहरूको चाप बढेको थियो।
झन्डै एक महिनाअघि क्वारन्टीनमा १,७२,००० मानिस रहेकोमा अहिले ती स्थलमा चाप कम हुँदै २३,००० जति बाँकी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
क्वारन्टीनस्थलहरू भरिन थालेपछि कोरोनाभाइरसको परीक्षण पनि तिनै स्थलमा केन्द्रित गरिएको थियो।
विगत साताहरूमा क्वारन्टीनकेन्द्रित परीक्षण गर्दा झन्डै ६-७ प्रतिशतसम्म मानिसमा सङ्क्रमण पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर करिब एक सातादेखि भने क्वारन्टीनस्थलमा मानिस कम हुन थालेसँगै त्यहाँ देखिने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्न थालेको छ।
अब भने क्वारन्टीनकेन्द्रित परीक्षण पर्याप्त नहुने विज्ञहरूले औँल्याइरहेका छन्।
अबको रणनीति कस्तो
क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या घट्दै गएपछि समुदायस्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्न लागिएको विभिन्न प्रदेशहरूले बताएका छन्।
केही प्रदेशले सङ्क्रमित भएर फर्किएका व्यक्तिको परीक्षण गरिने जनाएका छन् भने केहीले कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिक्षण गरिने जनाएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूमध्ये केहीले यस विषयमा निर्णय गरिसकेका छन् भने केहीले छलफलकै चरणमा रहेको जनाएका छन्।
चारवटा पीसीआर परीक्षण गर्ने उपकरण जडान गरिसकेकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहबाट परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्न लागिएको जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, “हामी अब हाम्रा ७१८ वटै वडामा पुगेर समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको अवस्था जाँच्छौँ। धेरै प्रभावित जिल्लाका वडालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।”
उनका अनुसार धेरै सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लाको प्रत्येक वडाबाट २० जति नमुना सङ्कलन गरिनेछ भने कम प्रभावित जिल्लाको प्रत्येक वडाबाट ५-६ वटा नमुना सङ्कलन गरिनेछ।
“सबै वडाबाट नमुना परीक्षण गरेर समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको साँच्चिकै अवस्थाबारे हामी प्रष्ट हुन चाहन्छौँ,” उनले भने।
क्वारन्टीनहरूमा अझै पनि ५,००० हाराहारीमा मानिसहरू रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ ले केही दिन उनीहरूकै परीक्षणमा केन्द्रित हुने जनाएका छन्।प्रदेश नम्बर १ का अधिकारीहरूले परीक्षणको आगामी रणनीतिबारे छलफलकै चरणमा रहेको जनाएका छन् भने प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्रै परीक्षण गरिने बताए।
गण्डकी प्रदेशले भने कोरोनाभाइरस सङक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएकाहरूको परीक्षणलाई प्राथामिकता दिइने जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले भनिन्, “हामी अब सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूको परीक्षण पहिला गर्छौँ।”
काठमाण्डू तथा ठूला सहरको हकमा के?
इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले हाल काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा समुदायमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अवस्था पहिल्याउन परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलनको काम गरिरहेको छ।
हाल अन्यत्र सङ्क्रमणको सङ्ख्या घट्दै गर्दा काठमाण्डू उपत्यकामा भने बढिरहेको र त्यो चिन्ताको विषय बनेको महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताएका छन्।
आइतवारसम्म उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा कुल ३४७ सङ्क्रमित भेटिएको छ।
“धेरैजसो सङ्क्रमित बाहिरबाट आएकाहरू नै छन् तर केही भने कतै नगएकाहरूपनि छन्। त्यसैले समुदायमा स्थिति के हो भनेर जाँच्न हामीले उपत्यकामा ५,००० तथा धेरै सङ्क्रमित पाइएका १० जिल्ला तथा ठूला सहरमा गरी कुल ४५,००० थप परीक्षण थालेका छौँ,” पाण्डेले भने।
केही दिन यता काठमाण्डूमा विभिन्न स्थान तथा धेरै मानिस जमघट हुने स्थलहरूबाट लिइएका नमुनामध्ये १,६२१ को परीक्षण गर्दा तीन जनामा मात्र सङ्क्रमण भेटिएको उनले बताए।
नख्खु, कोटेश्वर, बोडे, कपन, टोखा, शङ्खमूल गएर सङ्कलित गरिएका नमुनामा अहिले ०.१८ प्रतिशतमा मात्रै सङ्क्रमण पाइएको साथै ब्याङ्क, मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, एवं स्वास्थ्यसंस्थामा गएर सङ्कलित नमुनामध्ये ५०५ को नतिजा आउँदा कसैमा पनि सङ्क्रमण नपाइएको उनले बताए।
तर वास्तविक अवस्था थाहा पाउन थप परीक्षण गर्न आवश्यक भएकोमा उनी सहमत छन्।
साथै निकट भविष्यमा समुदायस्तरमा सिरोप्रेभलन्स सर्वेक्षण अर्थात् रगत परीक्षण गरेर कतिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भइसकेको पाइन्छ भनेर जाँच्न २१,००० परीक्षण गर्न लागिएको पनि बताइएको छ।